Sida looga Ciiday Boosaaso iyo Maamulka Gobolka oo Shacabka kula tukaday Masjid… – SBC
Sida looga Ciiday Boosaaso iyo Maamulka Gobolka oo Shacabka kula tukaday Masjid…
Posted by Webmaster on October 26, 2012 Comments
Iyadoo maanta si aad ah looga iiday magaalada boosaaso ciida wayn ee ciidul adxa ayaa waxa ay magaaladan ahayd mid ka duwan ciidihii hore marka laga eego raxmada eebe oo haraysay saacadihii la soo dhaafay gudaha iyo dacalada boosaaso sidoo kalena ay xiligan gashay Qaboobe dadka ku nool boosaaso u saamaxaysa in ay booqdaan eheladooda iyo asxaabtooda. dadkuna waxa ay ahaayeen kuwo xirnaa labisyo ciida ay ugu talagaleen ahaana dadkaas kuwo wajiyadooda ay ka muuqatay farxad hambalyada ciidana isugu bogaadinayay.
Ka dib wanaaga ciidan oo aan la soo koobi karin ayaa waxaa si is ku mid ah looga maqlayay masaajidada boosaaso adkaarta oo muujinaysa wanaaga iyo diyaargarowga salaada ciida waxaana Markaasi Si isku mid ah loogu dareeray masaajidada haday noqon lahaayeen rag dumar iyo caruur.
Mas,uuliyiinta gobolka bari iyo kuwa degmada boosaaso ayaa shacabkooda maanta kula tukaday Masaajidka wayn ee Dacwa kaasoo bartamaha kaga astaamaysan boosaaso qaadana dad aad u Fara badan.
Salaada ka dib ayaa waxaa halkaasi ka hadlay Culimo awdiin iyo masuuliyiintii ku sugnayd masjidka ugu horayna waxaa culimadii hadashay dhamaantood ay ka sinaayeen ducooyin ay soomaalida alle uga baryayeen in uu ka bixiyo dhibaatada ragaadisay dalka iyo dadka iyo waliba Abaaraha soo noqnoqda taasoo dadka ay ka dalbadeen in mar walba alle loo noqdo.
Sh Cabdirisaaq Xuseen Ciise oo ka mid ah culimada puntland ayaa waxaa uu ka hadlay salaada ka dib wanaaga iyo xasanaadka maanta oo kale ay leedahay isagoo sidoo kalena dadka u diray fariin ku aadan in ay taageeraan dadka danyarta ah.
Masuuliyiinta ayaa dhankooda kaga hadlay arimaha ciida waxaana ugu horayn halkaasi ka hadlay Duqa degmada boosaaso Xasan Cabdalla Xasan waxaana uu hambalyo ciida uu u diray umada Islaamka gaar ahaan shacabka boosaaso.
Gudoomiyaha gobolka bari Cabdisamad Maxed Galan ayaa isna dhankiisa hambalyo u diray shacabka gobolka barri eebana uga baryay in sanadkan sanadkiisa kale ay barwaaqo ku gaaraan .
Cabdisamad Maxed Galan ayaa dhanka kale ku dheeraaday mihiimada amniga uu shacabka u leeyahay si markaasi horumar dhinac walba loogaaro.
Ugu danbayntii ciidan ayaa ku soo beegmaysa xilli boosaaso ay qabowday biyuhuna ay fadhiyaan wadooyinka xaafadaha boosaaso inkastoo dadka boosaaso ay maalin ka hor ka sheeganayeen dhaqaale xumo soo foodsaartay sanadkan ..